सामसुङले ३ महिनामै कति कमाई गर्यो ? - लाल बिहानी
सामसुङले ३ महिनामै कति कमाई गर्यो ?
एजेन्सी, दक्षिण कोरियाली इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी सामसुङले पछिल्लो त्रैमासिकमा झण्डै साढे १२ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ । विश्लेषकहरुको अनुमानलाई माथ खुवाउँदै सामसुङले उच्च आम्दानी गर्न सफल भएको हो । हुवावेमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै सामसुङको मोबाइल तथा चिपको बिक्रीमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएसँगै जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको त्रैमासिकमा सामसुङले १० अर्ब ६० करोड डलर सञ्चालन आय गर्न सफल भएको हो ।
विश्लेषकहरुले उक्त त्रैमासिकमा सामसुङको आम्दानी १० ट्रिलियन वन हुने अनुमान गरेका थिए तर सामसुङले भने १२.३ ट्रिलियन डलर आम्दानी गर्न सफल भयो । उक्त अवधिमा सामसुङले कुल ६६ ट्रिलियन डलरका वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको छ । अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर सामसुङले उक्त त्रैमासिकको खुद मुनाफा तथा कम्पनीका हरेक क्षेत्रको क्षेत्रगत मुनाफाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेछ । सामसुङको आम्दानीमा बढोत्तरी भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै बिहीबार कम्पनीको शेयर मूल्यमा १.३ प्रतिशतको बढोत्तरी भयो ।
स्मरणहोस्: अप्रिलदेखि जुन महिनासम्मको दोश्रो त्रैमासिकमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेले सामसुङलाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्मार्टफोन निर्माता बन्न सफल भएको थियो । तर अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै हुवावेका उत्पादनमा गुगलको एन्ड्रोइड फिचरमा समेत बन्देज लागेकाले सामसुङका स्मार्टफोनको बिक्रीदर बढेको छ । निकट भविष्यमै सामसुङले विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीको रुपमा पुनरागमन गर्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वको दोश्रो ठूलो स्मार्टफोन बजारको रुपमा रहेको भारतमा पछिल्लो समयमा सामसुङले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । भूराजनीतिक द्वन्दका कारण भारतमा चिनियाँ स्मार्टफोनहरुको बिक्रीदरमा नकारात्मक असर परेसँगै सामसुङलाई भारतीय बजारमा फाइदा पुगेको हो ।
त्यस्तै मेमोरी कार्डको बिक्रीमा पनि सामसुङले आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धपछि हुवावेको बजार कमजोर हुँदै गएकोले त्यो ठाउँ सामसुङले लिँदै गएकेा तथ्यांकले देखाएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार सामसुङको फाइभ जी प्रविधिसहितको नयाँ आइफोन आउने मिति अक्टोबरका लागि धकेलिनु तथा अमेरिकी प्रतिबन्धको असर हुवावेका स्मार्टफोनमा पर्नाले दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा सामसुङका स्मार्टफोनहरुले बजारमा एकछत्र राज गर्न सफल भए ।
साथै महामारीका बेला बजारीकरण तथा विज्ञापनमा हुने खर्चसमेत घटेका कारण यस त्रैमासिकमा सामसुङको नाफाजन्यतामा पनि वृद्धि भएको बताइएको छ । समयमै फाइभ जी फोन लञ्च गर्नु तथा फोल्डेबल फोनसमेत बजारमा ल्याउनुका सकारात्मक प्रभाव सामसुङलाई परेको छ । दोश्रो त्रैमासिकमा भन्दा सामसुङका स्मार्टफोनको बिक्रिदर तेश्रो त्रैमासिकमा ४९ प्रतिशतले बढेको अनुमान गरिएको छ । अर्थात् यस ३ महिनामा सामसुङले विश्वभर गरी आफ्ना ८ करोड ६ लाख गोटा स्मार्टफोन बेचेको छ । एजेन्सी
नेपालमै किनेको मोबाइअल्को आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने
अनलाइन शिक्षा : पहुँच कम, प्रभावकारिता झनै कम
वैज्ञानिकको अनौठो अनुसन्धान,चन्द्रमामा मान्छेको वीर्य र अण्डाका लाखौं नमूना पठाउने तयारी
सातवटै प्रदेशवाट सीटीईभीटीको मौका परीक्षा २२ कात्तिकमा
अब माइक्रोसफ्टका कर्मचारीले स्थायी रुपमै घरबाट काम गर्न पाउने
विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रले मिटर रिडिङ नगरी जरिवाना असुल